ओनुमा पार्क! जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद doतुमा गर्न उत्तम चीजहरू - Best of Japan
ओनुमा क्वासी दक्षिण पश्चिम होक्काइडो, जापानको ओशिमा प्रायद्वीपमा रहेको राष्ट्रिय पार्क हो। पार्कमा ज्वालामुखी होक्काइडो कोमागाटाके साथै ओनुमा र कोनुमा पोखरीहरू = शटरस्टक
यदि तपाईं हाकोडेटको वरिपरि यात्रा गर्न र अझै भव्य प्रकृतिको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, म ओनुमा पार्कमा जान सिफारिस गर्दछु। ओनोमा पार्क हकोडेट केन्द्रको लगभग १ km किलोमिटर उत्तरमा अवलोकन स्थल हो। त्यहाँ, तपाईं वसन्त, गर्मी, शरद winterतु, र जाडो को सुन्दर प्रकृति आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। ओनुमा पार्कमा क्रूजिंग, क्यानोइ,, माछा मार्ने, साइक्लि, गर्ने, क्याम्पिंग र स्कीइing जस्ता विभिन्न गतिविधिहरू सम्भव छ। कृपया ओनुमा पार्कको सबै प्रकारका भ्रमण गर्नुहोस्।
ओनुमा पार्कमा गर्नु पर्ने उत्तम चीजहरू
ओनुमा पार्क: जाडोमा गर्नलाई उत्तम चीजहरू
ओनुमा पार्क: वसन्त, ग्रीष्म umnतु, शरद inतुमा गर्न उत्तम चीजहरू
ओनुमा पार्क, लगभग २० मिनेट JR हाकोडाटे स्टेशनबाट "सुपर Hokuto" एक्सप्रेस द्वारा (लगभग regular० मिनेट यदि यो नियमित ट्रेन हो भने)
ओनुमा पार्कको बीचमा, त्यहाँ माउन्ट छ। Komagadake। यो एक सक्रिय ज्वालामुखी हो १११११ मिटर उचाईको साथ। यस पहाडको ज्वालामुखी गतिविधिले गर्दा धेरै दलदलहरू यस पहाड वरिपरि बनिएका थिए। प्रतिनिधि ओनुमा हो। ओनुमामा १०० भन्दा बढी साना टापुहरू छन्। ओनुमा यसको सुन्दर दृश्यको लागि प्रसिद्ध छ।
ओनुमा पार्क गर्न, जेआर हाकोडेट स्टेशनबाट "सुपर होकुटो" बाट लगभग २० मिनेट (यदि यो नियमित ट्रेन हो भने .० मिनेट)। यदि तपाईं बस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो जेआर हाकोडेट स्टेशनबाट ओनुमा पार्क सम्म about० मिनेट जति छ। यो हकोडाटबाट धेरै नजिक छ त्यसैले तपाईं ओनुमा पार्कको एक दिनको मजा लिन सक्नुहुन्छ। ओनुमा पार्क वरिपरि धेरै राम्रा रिसोर्ट होटेलहरू छन्, त्यसैले तपाईं ओनुमा पार्कमा रहन विभिन्न गतिविधिहरूलाई चुनौती दिन सक्नुहुन्छ।
धेरै गतिविधिहरू ओनुमा गोडो युसेन कं, लिमिटेड द्वारा संचालित हो जुन निम्न साइट संचालन गर्दछ। निम्न साइटहरू अंग्रेजीमा वर्णन गरिएको छैन। त्यसोभए, तपाईं अग्रिम केहि पनि रिजर्भ गर्न सक्षम हुनुहुन्न। यद्यपि मूल रूपमा, तपाईले सेवा तुरून्त प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ दिनमा आरक्षण बिना। म कुनै आरक्षण बिना क्रूज जहाज आदिमा जान सक्षम भयो।
>> ओनुमा पार्क सम्बन्धी थप जानकारीको लागि कृपया यस वेबसाइटमा जानुहोस्
किन तपाईं बरफमा स्नोमोबिलिंगको आनन्द लिनुहुन्न?
ओन्मामा पार्कमा, तपाईं हिउँदमा र हिउँदमा माछा मार्ने जस्ता बाहिरी खेलहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यो स्नोमोबाइल हो जुन म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु।
जब जाडो आउँदछ, ओनुमा स्थिर हुन्छ। त्यसैले जनवरीको मध्यदेखि प्रत्येक वर्षको मार्चसम्म, तपाईं तालमा स्नोमोबिलिilingको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। ड्राइभि easy सजिलो छ, तपाईं यसको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं १ 18 बर्ष भन्दा माथिको हुनुहुन्छ। २,००० मिटर कोर्सका ल्यापहरू बनाउने योजना १,2०० येन हो। यदि तपाईंले दुई सिटर स्नोमोबाइललाई चुनौती दिनुहुन्छ भने यो २००० येन हो।
ओनुमा पार्कमा स्लेडिding्गको आनन्द लिन पनि भ्रमण गरिएको छ। तपाई ठूलो तालमा १ 15 मिनेट जति तालको वरिपरि जान सक्नुहुन्छ। स्टाफ स्नोमोबाइल द्वारा स्लेज कोर्नेछ।
यदि तपाईं बरफमा माछा पक्रन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं माछा मार्ने उपकरण भाडा सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रति दिन १,1,600०० येन हो।
ओनुमा पार्कको स्की रिसोर्टमा, तपाईं भव्य दृश्यहरूमा स्लाइड गर्न सक्नुहुनेछ
तपाइँ प्रामाणिक स्कीइंगको पनि मजा लिन सक्नुहुन्छ
ओनुमा पार्क वरिपरि धेरै स्की रिसोर्टहरू छन्। एक जना प्रतिनिधि हाकोडेट नाना स्नोपार्क हो। यो स्की रिसोर्ट प्रत्येक डिसेम्बरको मध्य देखि अप्रिलको सुरुमा खुला हुन्छ। तपाईं यहाँ स्कीइ and र स्नोबोर्डिंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं Hakodate बाट दिन यात्रा बाट आउन सक्नुहुन्छ।
हाकोडाटे नाना स्नोपार्क एक सुन्दर वास्तविक स्की रिसोर्ट हो। तपाईं गन्डोलामा एकैचोटि स्की स्लोपको शीर्षमा पुग्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईं km किमि कोर्सको स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ। स्की स्लोपबाट तपाईं शानदार माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। Komagadake तपाइँको अगाडि।
अवश्य पनि स्की रिसोर्टमा एउटा भाडा सेवा पनि छ त्यसैले तपाईं केहि पनि बिना आउन सक्नुहुन्छ।
म पहिले मेरो परिवारसँग यस स्की रिसोर्टमा छु। मेरो बच्चाले सानो स्लेज खेलेको थियो। हाकोडाटे नाना स्नोपार्कमा, सम्पूर्ण परिवारले यसलाई रमाउन सक्दछन्।
ढिलो वसन्त मायुशुटरस्टकमा ओनुमा पार्कमा आउनेछ
क्रूज जहाज द्वारा ओनुमा वरपर यात्रा
एक पूर्ण वसन्त मे महिनामा ओनुमा पार्कमा आउँनेछ। नोभेम्बरमा हिउँ पर्न थाल्दा वसन्त, गर्मी, शरद Onतु छोटो अवधिमा ओनुमा पार्कमा आउँनेछ।
यस अवधिमा, तपाईं ओनुमा पार्कमा विभिन्न गतिविधिहरू चुनौती दिन सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा पहिले, म तपाईंलाई तालमा डु you्गा लिन सिफारिस गर्दछु।
मेको सुरुदेखि अक्टुबरको अन्त्य सम्म, तपाईं एक क्रूज जहाज लिन सक्नुहुन्छ र ओनुमाको वरिपरि जान सक्नुहुन्छ। यात्रा समय करीव minutes० मिनेट छ। शुल्क एक वयस्कको लागि ११०० येन र बच्चाहरूको लागि 30० येन (to देखि १२ वर्ष उमेर)। यदि तपाईं यो जहाजमा चल्नुभयो भने, तपाईं पहिला ओनुमा पार्क हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई किन यस्तो गतिविधि बारे सोच्नुहुन्न जुन यस जहाजलाई पछ्याएपछि तपाई चुनौती दिन चाहानुहुन्छ।
तपाईं एक मोटरबोट (१२ व्यक्तिको क्षमता) पनि चढ्न सक्नुहुन्छ। मोटर डु boat्गा १० मिनेटमा ओनुमा वरिपरि जान्छ। मूल्य वयस्कहरूको लागि १,12०० येन र बच्चाहरूको लागि y०० येन हो।
यस बाहेक एउटा सानो रोइ boat डु boat्गा भाडा सेवा पनि छ। यदि तपाइँ दुई वयस्कहरूको लागि एक जहाज भाँडामा लिनुहुन्छ भने, भाँडा प्रति घण्टा १1,500०० येन छ।
वसन्त देखि शरद toतु सम्म, तपाईं ओनुमा पार्क = शटरस्टकमा समुद्री यात्राको मजा लिन सक्नुहुन्छ
ओनुमामा एउटा डुoe्गा डु row्गा बनाउने अनुभवहरू
ओन्मामा पार्कमा, तपाई विभिन्न रमाइलोको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, जस्तै तालमा क्यानोइing, ताल साइडमा साइकलिंग
यदि तपाईं आफ्नो शरीरलाई आफैं बढाउन चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई ओनुमामा क्यानोबोट डु row्गा बनाउन प्रोत्साहित गर्दछु।
ओन्मामा पार्कमा "एक्स्पान्डर ओनुमा कनो हाउस" भन्ने स्टोर छ जुन तपाईंको क्यानोइing अनुभवलाई समर्थन गर्दछ। अनुभवी प्रशिक्षकहरू तपाईंको डुoe्गा अनुभवमा भाग लिन्छन्। पूर्ण सुरुवातीहरू वा प्रारम्भिक विद्यार्थीहरूले पनि भाग लिन सक्दछन्। सामान्य यात्राको लागि आवश्यक समय २ घण्टा हुन्छ। मूल्य एक वयस्कको लागि 2००० येन, र प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि 4000००० येन हो। विवरणका लागि निम्न साइटमा हेर्नुहोस्। एक्स्पान्डर ओनुमा क्यानो हाउसमा, कोनोगाटेकमा हिमाल आरोहण जस्ता गतिविधि टेलिहरू क्यानोसको अतिरिक्त हुन्।
ओनुमा पार्कमा, तपाईं साइकल भाडा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं साइकल प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं एक घण्टामा ओनुमा वरिपरि जान सक्नुहुन्छ। म साइकलमा ओनुमा पनि घुमाएको छु। त्यहाँ केहि उतार चढावहरू छन्, तर कनिष्ठ हाई स्कूलका विद्यार्थीहरू र माथिको लागि, मलाई लाग्छ कि तपाईं वरिपरि जान सक्ने क्षमता छ।
ओनुमाकोएन पनि शरद leavesतुको पात = शटरस्टकको एक ल्याण्डमार्क हो
ओनुमा पार्कको पत्तवन्त आनन्द लिनुहोस्
ओनुमाकोएन शरद पातका लागि प्रसिद्ध छ। यो अक्टूबर २० को आसपास हो जुन शरद leavesतुको पातहरू शुरुदेखि नै शुरु हुन्छ। तपाईं नोभेम्बरको सुरू सम्म शरद पातहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
यस अवधिमा, पानी चराहरु को संख्या पनि धेरै ठूलो छ। तपाईं शरद leavesतु पातहरू र तपाईंको मनको सामग्रीको सुन्दर दृश्यहरूको मूल्यांकन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
निम्न साइटहरूले ओनुमा पार्कका विभिन्न दृष्टिकोण र अनुभव टुरहरू प्रस्तुत गर्दछ। माथि उल्लेखित एक्स्एन्डर ओनुमा क्यानो हाउस थोरै परिचय भएको छ। त्यहाँ पृष्ठहरू छन् जुन लगभग जापानी मात्र प्रदर्शन गर्दछ, तर मलाई लाग्छ कि यो केही हदसम्म उपयोगी हुनेछ।
>> नाना ओनुमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन र सम्मेलन संघ
तपाईं ओनुमा पार्क = शटरस्टकमा शान्त र सुन्दर शरद enjoyतुको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ
यो लेख लेख्नु अघि, मैले तपाईंलाई अंग्रेजीमा विभिन्न गतिविधिहरू कसरी बुक गर्न सक्दछु भनेर जाँचें। दुर्भाग्यवस, त्यहाँ धेरै साइटहरू छैनन् जुन अंग्रेजीमा बुक गर्न सकिन्छ। यदि जापानीमा, तपाईं अधिक गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी भेला गर्न र तपाईंको देश मा आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। तर अ in्ग्रेजीमा, यो बुक गर्न गाह्रो छ। मलाई यसको लागि दु: ख लाग्छ।
यदि तपाईं ओनुमा पार्क वरिपरिको होटेलमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो होटेल मार्फत विभिन्न गतिविधिहरूको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, हाकोडाटे ओनुमा प्रिन्स होटेलमा आवास योजना जुन किनोइing्ग अनुभव गर्न सक्छ र त्यस्तै लागी तयार छन्। दुर्भाग्यवश यस होटेलको अंग्रेजी साइटले यो देखाउँदैन। जे होस्, यदि तपाईं यो होटेलमा बस्नुहुन्छ भने, कृपया सबै तरिकाले होटललाई सम्पर्क गर्नुहोस्। म पहिले यस परिवारमा मेरो परिवार संग बसेको छु। हामीले होटल कोठाबाट सुन्दर हिउँ दृश्यको आनन्द उठायौं। म तपाईं ओनुमा पार्क मा अद्भुत सम्झना बनाउन को लागी सक्षम हुनेछ।
>> हाकोडेट ओनुमा प्रिन्स होटलको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ